Fotoana famakiana: 7 minitra Voahodidin'ny natiora tsara tarehy indrindra, tsy voakitikitiky ny fotoana, dia 10 amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra nitsidika ny tany. Avy any Eropa ka hatrany amin'ireo tanàna taloha manitikitika an'i Shina, ity diany ity dia ho feno tantara hatramin'ny vanim-potoana medieval ka hatramin'izao androntsika izao. Ny fitaterana an-dalamby no betsaka…
Fotoana famakiana: 7 minitra Misy mari-toerana mahafinaritra sy mahafinaritra maro any Eropa. Ao ambadiky ny zoro rehetra, misy tsangambato na zaridaina hitsidihana. Ny iray amin'ireo zavatra mahaliana indrindra sy mahavariana dia loharano mahafinaritra, ary nifidy tanana izahay 10 amin'ireo loharano mahafinaritra indrindra any Eropa. mozika,…